Qaabkee Qaad Lagu joojin Karaa Ma Qorshe Mise Go’aan by hamse riraash.
Sida aad wada ogtihiin ama aqligiina ku haysaan ,shayga aad gu yeedhaan “Qaadku waa walax ay ku dhex jirto maandooriyad badasha caqliga iinsaanka ah. Axadkii cuna iyo axadk aan u cunin had iyo jeer way kala duwan yihiin.
I saga oo ka baxaa arlo fara badan oo ku kala yaala qaaradaha Asiya iyo Afrikaba. Mid kastaaba waxa uu ugu yeedhaa magac u gooni ah. qaarkood baa u yiqaana inuu yahay Awliyo. Somaalida dhexdeedana aad buu ugu faafay.Wuxuuna la saaxiibay culimada aqoonyahanada iyo wax garadkii. wuxuu la falgalay dhaqankooda. Hadii gar la goynayo qaad la’aan ma dhacayso. Haddii arrimo kale laxalinaayana. Qaad la’aan lama xalin karro. Hadii qaad a waayana wax kala soconayaa haba yaraatee ma
Waxa kaloo yaab leh oo indhahaaga ku arkasaaa siduu u noqday shay aad iyo aad u qiimo badan.
Maalin dhawayd bay ahayd mar uu qof ugu yidhi. miyaad garanaysaa meeshuu qaadku ku yimi?! Markaasaan ugu jawaabay. Maya! markaasuu iigu jawaabay. Aniga haddaba kuu sheegayee meesha uu ka yimidee dhegahaaga ii raarici Markaasaan ku idhi ii sheeg. Niyahow waxaadba u u eeg tahay nin faa’do lehee.
Dabeedna waxa uu igu yidhi, baryo hadda laga joogoo kumaan kunoo sannadood ka hor ayaa waxa is raacay saddex nin oo la kala yidhaado Dul-Qarnayn, Khidir iyo Nabi Muuse. Sedexdaasina waxay baadi goobayeen wax la yidhaahdo maa’ul xayaat ama biyihii nolosha. Seddexdooduba waxay ka kala radaadinayeen seddexda jiho. dabeeto waxa ku guulaysanaya inuu hello Dul-Qarnayn biyihii. Dul-Qarnayna isla markiibaa wuxuu baadi doonayaa labadii kale si ay ula cabbaan. Markay labadii kale isasoo dul taageen meeshii,ayay arkeen biyihii oo qalalay.
Meeshii ay biyihii ka qalaleen isla markiiba waxa ka soo mudhyidhi geed. Geedkaasina waxa uu ahaa geedka maanta Qaadka ( Jaadka ) loo yaqaan oo aynu hadda arkayno!!!!
Markii uu ninkii dhameeyay qisadii ayaan aad ula yaabayaa. ugu danbayntii waxaan ku qanciyayaa inayna arrintan waxbaba ka jirin, isla markaasina ay tahay been iyo buunbuunin ay dhegaheenoo kaliya maqleen. Waxaan kaloo ku qancinayaa inuu qur’aankeenu inoo sheegay seddexdoodaba haddii aad akhrididna ka dhex helaysid inay ahaayeen dad saalixiin ahaa ayna suura gal ahayn inay ummada u beeraan wax iyaga dhibaya.
Haddaba aynu u soo noqono casrigeena Kan. qaadku. Imiga waxaad moodaa inuu si fiican ugu faafay bulshdeena dhibna uu ku Hayo.
Hadaba dawladda waxaan u soo jeedinayaa inay qaadka wax ka qabtaan xataa hadii ayna si kale u awoodi karin. Waa inay ku samaysaa cashuur aad u qaali ah!
Maxaa yeelay marka cashuurta lugu qaaliyeeyo qaadku aad buu u kacayaa qiimihiisu. Hadii ay qiimihiisu kor u kacana taasi waxay saamaynaysaa dadweynaha oo iibsan kari waayaya xataa iyaga laftirkoodaa is odhanaya kala dhima bahalka oo laga yaabaabaaba inay dadweynuhu ay maalin kaliya ka dhigtaan.
Haddii ay arrintasau si socotana aakhirarataankii waxay is noqon doontaa mid aad u yaraysa cunistiisa. Taasina laga yaabaa inay dadka badankoodu iska dhaafaan oo ay joojiyaan gabi ahaantiisba>